တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံ အမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang အားလကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
မေ ၁၃၊ ၂၀၁၉ မေ ၂၆၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာ မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှတာဝန် ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ယခုအချိန်အခါသည် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အကောင်းဆုံးနှင့်အမြင့်မားဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီး သံအမတ်ကြီးအနေဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများနှင့် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဒေသနေ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံမှု၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်အခြေအနေများ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်မှု အခြေအနေများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်း (OBOR)သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်အကျိုးပြုမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများပါဝင်နေသည့်အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ကိစ္စရပ် များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရပ်တည် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ တရုတ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ် အတွင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတ Mr. Xi Jinping အပါအ၀င် တရုတ်နိုင်ငံရှိ နယ်ဘက် စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များ နှင့်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်အောင်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်း စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ပွနျလညျထှကျခှာ မညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ သံရုံးမှတာဝနျ ရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ယခုအခြိနျအခါသညျ မွနျမာ-တရုတျ နှဈနိုငျငံအကွား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးမှာ အကောငျးဆုံးနှငျ့အမွငျ့မားဆုံးအခွအေနသေို့ ရောကျရှိနပွေီး သံအမတျကွီးအနဖွေငျ့ တာဝနျ ထမျးဆောငျခြိနျကာလအတှငျး နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြားပိုမိုတိုးတကျ ကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ထာဝရ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တရုတျနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ နယျစပျဒသေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နယျစပျဒသေနေ နှဈနိုငျငံပွညျသူမြားအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာဆကျဆံမှု၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျ နှငျ့ အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးအခငျြးခငျြး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားမှတဈဆငျ့ ဆောငျရှကျရမညျ့အခွအေနမြေား၊ နယျစပျကုနျသှယျမှုမြား တိုးမွှငျ့ဆောငျ ရှကျရနျ လိုအပျမှု အခွအေနမြေား၊ တရုတျနိုငျငံ၏ရပျဝနျးနှငျ့လမျးကွောငျးစီမံကိနျး (OBOR)သညျ မွနျမာနိုငျငံ အတှကျအကြိုးပွုမညျ့ စီမံကိနျးလုပျငနျးမြားပါဝငျနသေညျ့အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေး ကိစ်စရပျ မြားနှငျ့ပတျသကျပွီး တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာအလယျတှငျ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှရပျတညျ ဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ တရုတျနိုငျငံခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျ အတှငျး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံသမ်မတ Mr. Xi Jinping အပါအဝငျ တရုတျနိုငျငံရှိ နယျဘကျ စဈဘကျ ခေါငျးဆောငျမြား နှငျ့ရငျးနှီးစှာတှဆေုံ့၍ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျအောငျဆှေးနှေးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့မှုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျး စှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။